Yini iModeli 720? | Ezezimali Zomnotho
USusana Maria Urbano Mateos | | Umnotho jikelele, Inqubomgomo yezimali
Imodeli yesimemezelo 720 Kuyimodeli evunyelwe kusukela ngo-2012 futhi yenziwa ngokuya ngemithetho yentela neyezezimali ukuze kuqiniswe izinyathelo zokuvimbela kanye nokulwa nokukhwabanisa.
Ngalo nyaka we-2017, iningi labakhokhi bentela kumele lifake lokhu isitatimende sefomu elifundisayo ehambelana no-2016 ne imodeli 720.
Kulokhu, imodeli eyodwa idinga ukusetshenziswa, kepha kuzocatshangelwa izibopho ezintathu ezihlukile. Ingabe Isimemezelo sentela se-IT, Kufanele kwenziwe kuzimpahla namalungelo atholakala phesheya futhi lokho futhi kunenhloso yokwazisa uMgcinimafa ngawo wonke ama-akhawunti atholakala kuzinhlangano zezimali ezingaphandle.
Yazisa konke amagugu namalungelo, kanye nemali engenayo ebekiwe noma ephethwe futhi etholwe phesheya.
Yazisa ukuthi banamaphi ama-real estate aphesheya nokuthi yimaphi amalungelo abanawo ngaphezulu kwawo.
Umthetho wezezimali uhlukanisa izinhlobo zempahla ngamaqembu amathathu ahlukene kanti eqenjini ngalinye unemibandela kanye nesibopho sokubika ngalolu hlobo lwempahla.
1 Ngubani odingekayo ukufaka ifomu i-720?
2 Ungaligcwalisa kanjani ifomu elingu-720?
3 Izinyathelo zokugcwalisa ifomu elingu-720 zimi kanje:
4 Kwenzekani lapho isimemezelo samukelwa
5 Ungasifaka kanjani ifayela lesimemezelo sefomu 720 nge-inthanethi
6 Ungaletha kanjani ifomu le-720?
7 Memezela ngemuva kwesikhathi esinqunyiwe
8 Kwenzekani lapho ungakwazi ukukhokha imali
Ngubani odingekayo ukufaka ifomu i-720?
Lapho wethula lokhu imodeli 720 babophezelekile ukwenza njalo njalo abantu bemvelo nabasemthethweni abangabakhileyo manje endaweni yaseSpain. Bonke abantu abanezikhungo ezihlala unomphela ngaphakathi kwendawo yaseSpain noma izikhungo ezihlala unomphela kuleyo nsimu, noma ngabe ziphethwe ngabangewona abahlali, nabo baphoqelekile ukuyenza.
Umnikazi, omele, ogunyaziwe, ozuzayo, umuntu noma ibhizinisi elinamandla okulahla noma umnikazi onenzuzo, uzoba nesibopho sokwazisa mayelana ama-akhawunti ezinhlanganweni zezezimali ezitholakala phesheya, izibambiso, amalungelo, umshwalense kanye nemali engenayo ebekiwe, ephethwe noma etholwe phesheya kanye ne-real estate kanye namalungelo okuthengiswa kwempahla atholakala phesheya.
Akufanele kube khona noma yiluphi uhlobo lwesibopho uma kukhulunywa ngokubika izimpahla lapho lezo ezifakiwe zengezwa khona ngaphandle kwale mali eyeqile kuma-euro angama-50.000. Kunesibopho soku bika zonke izimpahla lokho kuyakha lapho isamba samanani sidlula ama-euro angama-50.000. Mayelana neqoqo lama-akhawunti ezikhungweni zezezimali, kuzokwanela ukuthi likweqe noma inani lesilinganiso esivela ngoDisemba 31 wonyaka ohambisanayo noma leso sezilinganiso ezijwayelekile.
Phakathi neminyaka elandelayo, ngamunye wabakhokhi bentela kuzofanela wethula le modeli 720 ukuze sazise ngamaqembu ahlukene akhona noma kunini lapho kutholakale khona ukwanda kwama-euro angaphezu kwama-20.000 XNUMX uma siqhathanisa nesimemezelo sokugcina esethulwe.
Ungaligcwalisa kanjani ifomu elingu-720?
Abantu abenza lokhu imodeli 720 futhi kufanele bayethule ngendlela eyisibopho, kufanele bakwenze njalo nge-telematics, okusho ukuthi, nge-intanethi. Kodwa-ke, kule minyaka embalwa ezayo ipulatifomu enezinhlelo zosizo izotholakala kubakhokhi bentela ukuze kube lula ukuthola amafayela ahlukene, kanye nethuba lokuwathola ngendlela efanele. Lokhu kwenza ukugcwalisa kube lula kakhulu.
Izinyathelo zokugcwalisa ifomu elingu-720 zimi kanje:
Manje, sizokukhombisa ukuthi ungayiqedela kanjani ngendlela eyiyo ukuze ungabi nezinkinga.
Into yokuqala okufanele uyenze, njengokuncishiswa, faka iwebhusayithi ye-Tax Agency bese ukhetha imodeli ezokwethulwa. EMpumalanga Imodeli 720 iyimodeli yesimemezelo esifundisayo ngezimpahla namalungelo atholakala phesheya. Ngaphezu kwalokho, isimemezelo kufanele sidluliswe ngesiginesha ye-elekthronikhi kanye nesitifiketi sangaphambilini esizofakwa kusiphequluli ngale njongo.
Kwenzekani lapho isimemezelo samukelwa
Uma kwenzeka isitatimende semali engenayo samukelwa, i-ejensi izokukhombisa esikrinini yonke idatha yamarekhodi ohlobo 1. Lokhu kuqinisekiswa ngokusebenzisa ikhodi yokuqinisekisa Inezinhlamvu ezifika ku-16 futhi okubandakanya usuku nesikhathi sokuqinisekisa ukuthi imodeli engu-720 izokwethulwa.
Kulokhu, umuntu imemezela imodeli 720 kufanele ugcine isitatimende esamukelwe futhi ugcine ikhodi yokuphepha.
Ngemuva kwalokho, kufanele ulinde ngoba kufanele uvumele i-ejensi yentela yenze inqubo yokuqinisekisa yonke idatha umuntu owenza isimemezelo ayifakile nge-intanethi. Ngemuva kwalokho, zonke izici zedatha zizohlolwa ukuze kubonakale ukuthi ziyahambisana yini noma cha kulokho okusungulwe ngokuya ngemiklamo enengqondo nengokomzimba.
Ungasifaka kanjani ifayela lesimemezelo sefomu 720 nge-inthanethi
Lapho wenza i- Isitatimende semodeli esingu-720 nge-inthanethi Kumele kwenziwe ngumnikazi womuntu oletha imodeli, kepha futhi kungenziwa ngomuntu wesithathu obemele lowo muntu.
Ungaletha kanjani ifomu le-720?
Lesi simemezelo sezimpahla namalungelo atholakala phesheya, sethulwa phakathi kukaJanuwari 1 noMashi 31, kufaka konke Model 720 imininingwane. Khumbula ukuthi ngonyaka we-2017, imodeli yokuzivocavoca ebhekise ku-2016 kumele yethulwe.
Kwenzekani uma ngikwazi ukwethula ngesikhathi esimisiwe
Uma kwenzeka ungakwazi ukwethula ifayela le- Ifomu 720 nge-inthanethi esikhathini esimisiwe, Ingathunyelwa phakathi nezinsuku zekhalenda ezi-3 ngemuva kokuphela kwesikhathi esishiwoyo.
Ngaphambi kokwethuka ngefomu le-720, kufanele wazi ukuthi lonke ulwazi olukuqukethe lunolwazi oluphelele futhi kufanele lubandakanye nesitatimende semali engenayo abakhokhiswa ngayo intela.
Memezela ngemuva kwesikhathi esinqunyiwe
Esimweni lapho umuntu ozokwenza imodeli 720 engakhombisa ngokusobala nangokuvikelekile ukuthi izimpahla anazo phesheya ziyahambelana nemali engenayo emenyezelwe nokuthi babengesona isakhamuzi saseSpain ngaleso sikhathi. Kumele kuqinisekiswe njalo ukugwema ukuthi ukubekwa kwempahla kungenziwa kumuntu, njenge umholo wentela engenayo lapho, ngaphezu kwalokho, isijeziso esingu-720% sesamba singasetshenziswa kumuntu okhohlwe ukuveza ifomu 150. Inani elisetshenziswe yindlu ngama-euro ayikhulu ngedatha ngayinye kanye nama-euro ayi-100 ngeqembu lezakhiwo ezithile. Uma kwenzeka kunezimpahla eziningi, okungukuthi, ukuthi umuntu unephothifoliyo enkulu yezokuphepha, izinhlawulo zingadaleka.
Kwenzekani lapho ungakwazi ukukhokha imali
Uma kufanele umemezele isikhathi ngaphandle kokujwayela intela yomuntu siqu engenayo Ngaphambi, ngokwesibonelo, izinhlobo zemali etholwayo njengomhlali, lokhu kubhekwa ngochwepheshe njengokuzibulala kwezomnotho, ngoba yize inhloso enhle yokwehliswa ibonakala, iqiniso lezimali lihluke kakhulu futhi bangasho amanani aphakeme kakhulu ngakho konke okuhle. Imvamisa, inani liyi-50% njengentela yomuntu siqu engena kuze kufike ku-150% njengenhlawulo noma inhlawulo.
Uma kwenzeka unquma zimemezele ngokwakho, Kufanele wazi ukuthi isinqumo sokugcina sizothathwa yizinkantolo. Izinkantolo zizokonga konke okubekiwe noma imali engenayo ebingakhokhelwa. Ngeke bavumele ifa ukuthi lifake intela yemali engenayo ngezinga elingaphezulu kuka-50% uma kwenzeka uthola ifa noma umnikelo.
Ngeke bavumele i-hacienda isebenze kuyo umkhokhi wentela inhlawulo noma isijeziso okungalingani kwe-150% inqobo nje uma umuntu ememezele ngokuzithandela, eletha wonke amaphepha adingekayo ukwenza ifomu 720.
Ingasetshenziselwa amacala amahle. Impilo kulezi zimo imvamisa iphakeme kakhulu, ngoba kude ne-50% esatshwayo, kuzocelwa ama-60% kepha umuntu angadedelwa ekujezisweni noma inhlawulo. Lapho inhlawulo isiceliwe kwi-hacienda, umuntu akasakwazi ukuphenduka futhi acele i-hacienda ukuthi ayibuyise.
Lesi yisibonelo sendlela ukuphenduka komuntu ofuna ukwenza isimemezelo sokuphenduka kuzosetshenziswa ngayo futhi uzozama ukumemezela ngemuva kwesikhathi esinqunyiwe. Lo muntu uthi umemezela ama-euro ayizinkulungwane ezingama-33.000 ngemuva komnqamulajuqu ukuthi unawo ngaphandle kweSpain nokuthi ubenayo leyo mali kusukela ekupheleni konyaka wezi-2012. Ngaphezu kwalokho, leyo mali itshalwe kuma-akhawunti ama-4 nasezimweni zokuphepha eziyi-15.
Kuzofanele wethule futhi ukhokhe i-IRPF 2012 = 330.000 x rate approx. 50% = € 165.000.
Isijeziso esisemthethweni 2012 = ama-akhawunti ama-4 x 5 idatha = 20 idatha x 100 = € 2.000
Isijeziso esisemthethweni 2012 = amanani ayi-15 x 2 idatha = 30 idatha x 100 = € 3.000
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Yini iModeli 720?
Ngingowesinye isizwe, ovela e-EU, futhi bengihlala eSpain kusuka ngo-Agasti 2012 kuya kuDisemba 2017 bobabili behlanganisiwe.
Ngisebenzile njengomuntu ozisebenzelayo nanjengesisebenzi futhi ngangimemezela ngokujwayelekile minyaka yonke, kusuka ngo-2013 kuya ku-2016 (manje sengizomemezela imali engenayo yango-2017).
NgoJanuwari nje kuphela walo nyaka, i-2018, bengazi (ngiyazi, akunakulungiswa, kepha yilokho okwenzekile) mayelana nemodeli engu-720! Abazali bami bahlala endlini ezweni lakithi ephethwe ngumfowethu kanye nami (abazali bami bayithenga, kodwa egameni lethu).
Ngenhlanhla engangibuyile eBarcelona, ​​ngaya kwaMgcinimafa ukuyozwa ukuthi ngenzeni futhi bangiluleka ukuthi ngifake ifomu lembuyiselo engu-720 kulo nyaka futhi kungcono ukulungisa amafomu entela yeminyaka yonke edlule , ngaphambi kokuba ngihlawuliswe.
Ngifake amafomu entela angu-720 ngoMashi, kodwa kuyangethusa kancane ukulungisa amafomu entela edlule. Ikakhulukazi ngoba unyaka nonyaka uMbuso WaseSpain wawubuyisela kimi imali yentela, ngenxa yesimemezelo sami. Futhi, kulokho engikubonayo okusalungiswa, nakulo nyaka.
Futhi, ngaphezu kwakho konke, engikuqondileyo ukuthi noma ngabe ngikwenza ngamabomu futhi ngikulungisa ngokuzithandela, izinhlawulo zisazofika, futhi mhlawumbe kuphephe kakhulu ukuthi zizofika!
Uma kufanele ngilungise izitatimende ezingenhla ngemininingwane engingakaze ngiyibeke endaweni yase-Italy, ngizo. Kepha akucaci kimi ukuthi yini okufanele ngiyilindele, ukuthi bangafuna malini nokuthi kuzokwenzeka yini.
Yiziphi izinto ezingenza ukuthi imakethe yamasheya iwe?
Futhi kungani ungatshali imali engenayo engaguquki?